Abafileyo girls musa ukuxoka (TV uphawu) - Ihlabathi Ividiyo Dating
Abafileyo girls musa ukuxoka (TV uphawu) – Ihlabathi Ividiyo Dating
Abafileyo girls musa ukuxoka (lesihloko: isixhosa, isingesi kuba”izizathu kutheni”) i-i-american lwethelevijini uphawu ngokusekelwe eponymous samkele yi-Jay Ashere.
Kweyokwindla kwi Netflix bakhululwe. Ngomhla we-Netflix, Owenza-ngokuba Wafa girls: waye kanjalo ipapashwe lies ibali ngasemva kwayo, kuquka psychologists.
Wanga waba bakhululwe kwindawo yesibini kwixesha elizayo lokulima, ihamba kunye yesibini”Ukwenza”.
Ngojuni yaba yesithathu kwixesha lokulima ukuze abe kwaziswa. Kwiiveki ezimbini emva suicide yakhe classmate Hana Baker, High School student Eclay Jensen ufumana impahla. Kule, lowo ufumana ama-audio cassettes, apho Hana ke izizathu suicide ubiza abantu ukusuka zabo-bume kwaye iifayile kwi blame kuba oku. Umntu ngamnye ke (ubuncinane) omnye izizathu ukuba blame.
Eclay ngomnye wabo
Ngelixa yena listens ukuba tapes, afike kwindawo emnyama secrets of Hana kwaye nezinye ezininzi classmates kwi-ingoma. I-uzibeke ufumana u-pronged: kwixesha elidlulileyo, unako ukubona Hana ke stories kwaye kwiimeko ukuba ingaba influenced kuwe. Kubukho Eclay kukuba confront abanye abantu ngomhla tapes. Ezi bathe beva tapes inxalenye sele, kwaye ndiya zama ukuba inkqubo efanelekileyo stories. Njengoko Hana sichaza kanjalo offences, ukunqanda kakhulu ukuba cartridges eyaziwayo uluntu. Enye Studios acquired ngofebruwari, amalungelo incwadi ukuziqhelanisa Kwabafileyo kubekho inkqubela ethiwe yi-Jay Ashere. Emva kwexesha elifutshane, engundoqo, waba uxakekile indima Hana Baker, kuqala nge Selena Gomez. Ekupheleni Kuka-Oktobha waba kwaziswa yi-Netflix ukwenza fabric a encinane-uphawu, Gomez endaweni yoko, njengoko wonke umntu obandakanyekayo. Eyona indima Hana Baker onayo ngoku Katherine Langford kwaye Dylan Minnette ka-Eclay Jensen. Baba waguqukela ukulandela kwihlobo kwi-Emntla California kumantla Bay Indawo. Eyona iindawo baba izixeko-Firefox Rafael, Vallejo, kwaye Sebastopol. Kuba esikolweni scenes, analyte High School, waba nenxaxheba Sebastopol, nto leyo ibisoloko renamed kuba uphawu”Inkululeko Phezulu Esikolweni”. Eziliqela classrooms kwaye library wasetyenziswa njengoko filming iindawo. I-scenes kwi-gym kwaye yesikolo ibhola baba filmed kwi iqonga ngomhla Mare Island Studios kwi-Vallejo. Kungenjalo, kakhulu le iinkcukacha waba esifutshane kwi-icala-ezitratweni kwaye iivenkile ye-Firefox Rafael. Ekuqaleni inga ngomhla lwaqiniselwa yemveliso omnye-inxalenye yesibini lonyaka.
Wanga wenziwe ipapashwe
Kulandela kwi ukususela isiphelo lokuqala lonyaka kwaye bohlwaywe i-zoko ka-Hana Baker ke ukufa ngokunjalo njengoko enobunzima ixabiso inkqubo amanye amanani. I-isijamani wokwenza ngaxeshanye ngu yenziwe yi-synchronous inkampani i-TV Synchron-Berlin. Elijongene dialogue Umlawuli Jeffrey Wipp silapha, lowo ibonise olandelayo ukuba Thomas Mariya Lehmann, Andre Lemme, Catherine seaman kwaye Marco Rosenberg, dialogue ncwadi. E-USA, yokuqala xesha uphawu yaba predominantly impendulo xa Enew York phinda-Phinda kwaye comment ingxwaba Ngeposi wabonakalisa kakhulu. Ngelixa abanye yenkcubeko oko rated uphawu ngenxa yabo wavusa ngemiba bullying, udushe, ngesondo ungcungcuthekiso, rape, kwaye suicide kwi dibanisa, hayi Abafileyo kubekho inkqubela lies criticized kwihlabathi liphela ngo Doctors kwaye impilo organizations. Psychologists e-United States kuba walumkisa ulutsha nabantu abadala malunga uphawu, ukususela ezi omeleze mental health iingxaki, okanye ayikwazi umnxeba. Kanjalo waba walumkisa ukuba uphawu ayikwazi kukhokelela Ibhodi senzo. Njengoko oyicelileyo Netflix ukumisa usasazo lwe uphawu. Paris Ejackson ezixhaswayo i-criticism ye-psychologists kwaye uluvo ukuba uphawu ayikwazi sizathu psychologically predisposed abantu, deterioration ye-mental imo engqondweni. Eneneni, kwakukho iingxelo ukuba abanye abafundi injured ngokwabo kwaye njengokuba ulungelelaniso ye-lwethelevijini uphawu ulwazi. Linas, umseki ye-Non-Inzuzo ukulungiselela Ukubhala Uthando ngomhla wakhe Izikhali, wabhala kwi ileta ukuze mentally abomeleleyo kumele kuphetshwe kuluhlu lwazo. Ezininzi canadian izikolo, lwethelevijini uphawu ukugxotha kwi-new Zealand, ngokungqinelana isigqibo yesizwe abasemagunyeni engqondweni, uphawu nyaka uza kubona kuphela kubukho a umzali okanye umgcini ngokusemthethweni. I-Australian impilo umbutho Iintloko inyathelo nje criticised yokuba uphawu zidityanisiwe ezinobungozi isiqulatho kunye othi suicide. Umphathi Kristen Udouglas pointed phandle ukuba ifowuni unxulumano kwaye E-ukubhala phezu kwayo kwi counselling ii-ofisi, ezaye ngokusekelwe uphawu, kuba ukwanda. Kwi-Germany, ngolo ukwanda unxulumano kwaye E-ukubhala phezu kwayo enxulumene uthotho ayikho wabhala kwi-inani ngokuchasene lusizi. Kanjalo, umboniso ka-Hana ke suicide kuluhlu lwazo iya kuba criticized njengoko irresponsible. I-umbutho komlomo isithuba ukuba criticism, ukususela enjalo scenes ayikwazi kukhokelela imitation izenzo. Ekuqaleni uphawu iya kuba walumkisa ka-kunokwenzeka zoko, ukususela incopho ka-okubonakalayo NATHI-i-american activists ye-Gcina akonelanga. Iintloko inyathelo nje ibongoza abazali, izikolo impilo organizations, kunye imixholo ye-uphawu. Ute Leitzkau, ilungu ulawulo Ibhodi isijamani ekuhlaleni kuba zokuthintela ka-suicide, uthatha i-criticism ye-aid imibutho kwaye zonyango nabo kufuneka ilungelelaniswe, nkqu ukuba abalimi ka-uphawu ukuba abe wasukela ngokunxulumene Leitzkau elungileyo indlela. Leitzkau wathi ukuba uza uzama ukwenza kwesi sihloko ka-suicide ukuba uyithumele, kwaye educate, nangona kunjalo, wena criticized indlela ukuze ingaba uzama. Uphawu uya kunikela enkulu dibanisa indawo yabantu abatsha abo ubuso efanayo Imeko. Kanjalo qaphela ukusuka Netflix ukuba uphawu basenokuba disturbing, criticised njengoko inadequate. Leitzkau linoluvo ukuba uphawu akazange ezilungele kuba mentally ibe igcwalisiwe teenagers kwaye ulutsha nabantu abadala. Nic Scheff, inxalenye iqela le ababhali ka-uphawu, disagreed. Wathi kwi-i-enze udliwano-ndlebe ukuba uphawu i-umboniseli kunye inyaniso ka-confronting kwaye made it clear ukuba suicide akusebenzi eyiyo usindiso, kodwa agonizing Jones. Ukongeza, Scheff, uphawu kunye unye ukuba usebenzisa umgca kwi suicide quietly kwi-kulala. Actress Kate Walsh lanyanzelisa ukuba Abafileyo kubekho inkqubela ethiwe akufunekanga uqwalaselwe njengoko a inkqubo esisinyanzelo udweliso lwenkqubo kwi-ezikolweni. Walsh ilungelelaniswe yakhe ingxelo nge esithi ukuba uphawu iya kubonisa njani a suicide khangela, kwaye ukuba lo mxholo ngu big afihlakeleyo. Ukongeza, uphawu zibhengezwe le ngxoxo yemiba efana ngesondo udushe, esikolweni bullying, intshutshiso ngokusekelwe imigca enqamlezeneyo umbala, isini, okanye ngesondo uhlengahlengiso. Kanjalo, Selena Gomez defended Abafileyo girls musa ukuxoka ngokuchasene allegations. Baya argued ukuze babe siyigcinile ukuba uzibeke ye-samkele, kwaye wathi ukuba Wefilim inikwe umsebenzi Jay Ashere visualized. Uthe ukuba uphawu ingaba ngokukhawuleza okanye kamva abe umxholo ka-controversy. Isihloko se suicide ayikho ukuxoxa kulula ukuyisebenzisa, yiyo yena wayevuya, njengoko ngxoxo ka-isihloko ukuba ingaba kokuya kwi okwangoku
← Dating wam iphepha
Erotic yehlabathi ka-omdala Dating →